Magacaabistii Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe Sadex aan wada socon: Qormadii: 22aad | Somaliland.Org
Magacaabistii Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe Sadex aan wada socon: Qormadii: 22aad
November 14, 2012	(Maalin-qorka “Mucjisadii nagu soo martay Wasaaradda Warfaafinta: 19/3/12ka-4/9/12ka) Qalinkii Maxamed Cismaan Mire (Sayid) Guddoomiyaha Dawan Media Group. E-mail: dawanchairman@gmail.com
Qormadii 21aad ee qoraalkan taxanaha ah waxaan idiinku soo gudbiyeyqaar ka mid ah arimaha la rumaysan yahay. In ay sabab u ahaayeen in wasiir Boobe si badheedh ah u diido wax ka qabashada musuq maasuqii baahsanaa ee wasaaraddiisa ka socday. Iyada oo sida uu isaguba inoo qirtay boqolaal jeer oo kala duwan loo soo jeediyey in uu wax ka qabto.
Hadaba waxaan jecelahay inta aynaan ka bixin isla mawduucaas in aynu xusno qodob iyo iyo laba ka mid ah isla arimahaas loo tirinayo in ay sabab u ahaayeen xil gudasho la’aantii dhinaca musuq maasuqa ee Boobe. Kuwaas oo aynaan kaga hadlin qormadii 21aad ee shalay. Waana kuwan qodobadaasi:-
• Waxyaabaha kale ee loo tirinayo in ay Wasiir Boobe ugu wacnaayeen. Inuu dhegaha ka furaysto talooyinkii faraha badnaa iyo baaqyadii kala duwanaa ee loogu sheegayey, in uu wax ka qabto musuqa iyo maasuqa wasaaradiisa ka socda. Musuqaas oo uu taa cakiskeeda si toos ah u difaaci jirey sii socoshadiisa iyo dadka wadaba. Ayaa waxa la tuhunsanyahay in ay kow ka ahayd aqoon yaraan la xidhiidha dhinaca diinta. Maxaa yeelay marka la eego hadalka hoos ku xusan oo ah mid uu Boobe laftiisu inoogu sheegay qormadii 30aad ee qoraaladiisa.
Waxa aynu si fudud u dareemi karnaa in aanu Boobe ahayn nin ku wanaagsan dhinaca diinta. Hadalkaasina waa kane bal hada idinkuba si fiican ugu fiirsada. Waxuu ina yidhi. “Subaxnimadii hore ee 30/7/2012ka oo maalin Isniin ah ahayd, ayaa waqti ay saacaddu ku beegnayd ilaa 7.10 ee aroortii hore, ayaa la ii soo sheegay in Hanti-dhowrihii Guud xidhay oo baadhayo xafiiskii
Agaasimaha Maamulka iyo Xisaabaadka ee TV-ga Qaranka. Marka uu tilifoonkaasi igu soo dhacayay waan quraacanayay. Markiiba dhankii xafiiska ayaan u boqoolay. Waan iska garanayay in aanay ahayn baadhis caadiya ama aanu Hanti-dhowraha Guud iskii u iman bal se uu ku jihaysnaa Xasan Maxamuud oo ay hadal-hayntiisu aad u badnayd in badanna la igala hadlay”.
Waxaa run ahaantii wax lala yaabo ah, oo aan si gaar ah hoosta uga xariiqayaa. In maalinta uu Boobe tilmaamay in uu quraacanayey ee 30/7/2012. Ay ahayd maalin Ramadaan ah, oo ay dadka muslimiinta ahi soomanaayeen. Taas macnaheeduna waxa weeye in aanu Boobe soomanayn maalintaas iyada ah. Sidaas darteed ninka da’daas ah ee ina leh maalin cad oo ramadaan ah ayaan wax cunayey. Isla mar ahaantaana aan inoo sheegin wax qiil iyo cudur daar ah oo la xidhiidha sababta uu u soomi waayey. Ma yahay nin warkiisa la qaadan karo, oo aynu run ka filli karno? Ma yahay nin amaano xafid iyo Alle ka cabsi leh, oo musuq maasuq ka madhnaan kara? Mase yahay nin aynu qallinkiisa ka martiyi
karno inuu si daacadnimo ah, oo been ka madhan inoogu soo gudbiyo sababihii xilka lagaga qaaday? Anigu ma ihi nin su’aalahaas ka jawaabidooda halkaas u dhaafaya.
Waayo idinka ayaan idiin daayey oo maankiina iyo maskaxdiina lakaashandoona. Hase ahaatee waxaan hore ugu sii soconayaa. In aan idiinka waramo sidii ay wax u dhaceen maalinta Boobe quraacanayey, ee uu Hantidhawrku baadhista ka bilaabay wasaaradda warfaafinta. Ugu horaynta waxaan si cad u beeninayaa hadalka Boobe ka soo yeedhay, ee
ku saabsan in baadhista Hantidhawrku ahayd mid ku koobnayd Tv-ga oo keliya, ama cid gaar ah ku jihaysnayd. Waxaanan idiin sheegayaa in baadhistaasi ahayd mid caam ah, oo ay ka sinaayeen waaxaha maamulka iyo lacagta ee Tv-ga, Radio Hargeysa, Dawan Group iyo Agaasimeyaashooduba. Qofkii taas xaqiijinteeda u baahanina waxuu toos u tegi karaa xafiiska Hantidhawrka Guud ee Qaranka. Kaas oo uu ku soo arki karo faylalkii iyo documentiyadii xisaabaadka ee uu Hantidhawrku sadexdaas waaxoodba maalintaas lafteeda ka qaatay, oo sidii
halkaas u yaala baadhistoodiina weli socoto. Marka hadaba arintu sidaas tahay sow ma odhan karno Boobe waxyaabihii wasaaradiisa ka dhacayey iyo baadhistii uu Hantidhawrku ka wadey waaxaheeda oo dhan.
Waxa uu ka ogaa oo keliya intii Xasan Maxamuud iyo Tv-ga khusaynaysay oo qudha. Sidoo kale sow ma odhan karno sheekada Boobe ee ku saabsan baadhista Hantidhawrku waa mid xaqiiqada ka fog, oo aan sal iyo raad toona lahayn, isla markaana danno iyo ujeedooyin gaara ku dhisan.Intaas marka aynu ka nimaadno. Waxaa jirtey in 30/7/2012-ka oo ahayd maalin Isniin ah, kuna beegnayd sida aan qiyaasayo 7-dii ilaa 8-dii bishii Ramadaan ee ina dhaaftay. In subaxnimadii hore abaaro 6:30 daqiiqo saacadu markay ahayd ay soo galeen xarunta wasaaradda wafaafinta soo galeen. Koox Hantidhawreyaal iyo Askar Boolis ah ka kooban, oo uu horkacayo Hantidhawraha guud ee Qaranku Md. Maxamuud Aw Cabdi (Maxamuud Dheere). Dabadeedna kooxdaasi waxay markiiba toos u abaareen xafiisyada maamulka iyo lacagta ee wasaaradda iyo Tv-ga. Kuwaas oo aanu midkoodna furnayn xiligaas ee wada xidhnaa. Hase ahaatee waxay mid kasta xafiisyadaas ku sii dul xidheen Quful weyn oo ay iyagu siteen. Sidoo kale waxay midkasta albaabkiisa ku dhejiyeen waraaq xabag leh, oo ay dusha kaga qorantahay lama furi karo. Sidaas darteed markii ay madaxda iyo hawl wadeenada kala duwan ee wasaaraddu shaqada soo galeen waxa ay ka war heleen in wasaaradda uu Hantidhawr soo galay xafiisyadaasna xidhay. Iyada oo talaabadaas Hantidhawrku qaadayna ay madaxda iyo shaqaalaha wasaaraddu u dareemeen, ama u arkayeen siyaabo kala duwan oo aan isku mid ahayn.
Previous PostWADDANI Oo Xaflad Soo Dhawayn Ah u Sameeyey Ururkii JAMHUURIGA Oo Ku soo biirayNext PostShaqo ka fadhiisi iyo mudaharaadyo carqaladeeyey gaadiidkii Yurub iyo isku socodkii.	Blog